Archive du 20171127
Silamo mibaby entana Mitombo isa ireo mivezivezy eny an-dalambe
Miha mitombo hatrany ny sarina silamo be volombava, manao akanjo rebareba, mibaby kitapo be sy mitondra harona mandeha an-tongotra eto amintsika.
Tahina Razafinjoelina “Ataovy mangarahara ny fikirakirana ny fifidianana”
Takiana ny hisian’ny mangarahara amin’ny fifidianana manaraka eo, hoy ny filoha nasionalin’ny antoko Tia Tanindrazana nandritra ny fandaharana don-dresaka tao amin’ny fahitalavitra TV Plus Madagascar halina.
Fanjakana Rajaonarimampianina Mpiliba sy mpaneso vahoaka
Niedinedina ery ny fitondram-panjakana nandeha niliba tany Mahajanga ny faran’ny herinandro teo. Notanterahina tany an-toerana mantsy ny filankevitry ny minisitra mitety faritra ary nifanindran-dalana tamin’izany ny kongresim-paritry ny antoko HVM.
Fikambanana MAJIA “Mila atambatra ny Malagasy.”
5 taona izao no niorenan’ny fikambanana MAJIA (Madagasikara Antsika JIAby. Tanjona napetrak’izy ireo hatramin’izay ny hanambatra ho iray ny Malagasy manerana ny nosy.
TIM Ambohimanarina Hanara-maso akiaky ny lisitry ny mpifidy
Nampiantso an’ireo mpitantana ny FokoTIM Ambohimanarina ny DISTIM ny sabotsy 18 novambra teo ho fiomanana sahady ny fifidianana. Mahakasika ny fanaraha-maso ny lisi-pifidianana araka ny toromarika nomen'ny filohan'ny TIM, Marc Ravalomanana no antony.
Manao propagandy Rajaonarimampianina Mbola be lavitra no ho vitako…
Sahy mifaninana isika ! izany ny fananamby iray apetratsika. Efa nanomboka isika, efa niasa isika fa mbola milaza aminareo kosa aho hoe tsy vita ny asa, hoy i Hery Rajaonarimampianina.
Federation Famubo Madagascar Hiady amin’ny herisetra mahazo ny vehivavy
Tao anatin’ny fanamarihana ny andro iraisam-pirenena hiadiana amin’ny herisetra atao amin’ny vehivavy notontosainy teny amin’ny hotely Colbert ny sabotsy 25 novambra 2017 teo no nanambaran-dRtoa Razafindravony Mélanie filohan’ny Federation Famubo Madagascar fa mila foanana ny herisetra mianjady amin’ny vehivavy eto amintsika.
Famonoana tovovavy tany Ambositra Mampiahiahy ny SMS tao anaty findainy
Manomboka ahitana mangirana amin’izao ny raharaha famonoana an-dRafitoharimaka Rosalie, ilay tovovavy hita faty tao amin’ny hotely Violetta tao Ambositra ny marainan’ny 23 novambra lasa teo.
Fitokonan’ny mpitsara Tavela irery ny filohan’ny SMM
Efa ho iray volana mahery izao no tsy nandrenesam-peo intsony ny sendikan’ny mpitsara eto Madagasikara (SMM).
Fiara nifatratra teo am-bodihazo Zazalahikely 12 taona maty tsy tra-drano
Zazalahikely vao 12 taona monja no maty tsy tra-drano vokatry ny lozam-pifamoivoizana mahatsiravina tany Vohilengo, 6 km tsy hidirana ny tanànan’i Vavatenina ny sabotsy 25 novambra teo,
Kara-panondro 300 Ar no vidiny eo anivon’ny tranopritim-pirenena
Nivoaka tamin’ny fahanginana Randriamboavonjy Jean Angelson, tale jeneralin’ny tranoprintim-pirenena nanazava ny mikasika ilay fiakaran’ny vidin’ny kara-panondrom-pirenena eto amintsika izay tena niteraka resabe tokoa teo aloha teo.
Telma Coupe de Madagascar 2017 Norombahin’ny Som Fosa Junior ny amboara
Voalohany teo amin’ny tantarany hatramin’izay 2 taona niorenany izay no nandrombaka amboara nasionalin’ny baolina kitra ny ekipan’ny Fosa Junior avy any Mahajanga.
La Pie - Analamanga rugby “Tsy ara-dalàna ny AG nataon’ireo seksiona 3”
Tsy ara-dalàna ny AG na Fivoriambe nataon’ireo seksiona 3 tamin’ny zoma 24 novambra teo teny Ivandry,
Rugby Tsinjaka 2 Nahomby ny hetsika tamin’ny ankapobeny
Nahavory olona nahafeno kianja ny hetsika Rugby Tsinjaka niarahan’ny lalao rugby niandrasana ny fihaonan’i Ftm Manjakaray sy Usa Ankadifotsy (15-13) sy ny seho an-tsehatr’ireo mpanakanto malaza toa an-dry Black Nadia, Mijah, Jean Aimé,
Samy mahay miresaka sy milaza ho tia tanindrazana na ny mpitondra fanjakana na ireo mijoro ho mpanohitra. Samy milaza azy ho henjana sy mahavita azy avokoa ny rehetra. Tsy misy maharesy lahatra ny vahoaka anefa izy ireo.
Fiantsonan’ny 138 eny Anosipatrana Misy mitady haka
Misy mitady haka ny toby fiantsonan’ny taksibe ao amin’ny zotra 138 mampitohy an’i Tsaralalàna sy Anosipatrana. Olon-tokana no mitady haka azy io mba hanaovany toby fiantsonana ho azy manokana, raha ny fanadihadiana natao.
Mpitora-bato ao Brickaville navotsotry ny fitsarana Manambana ny hitokona ireo mpitatitra amin’ny RN2
Lasa miteraka olana goavana eo amin’ny zandary sy ny mpitatitra ary ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Toamasina, ilay raharaha nahazoan’ireo mpitora-bato ao Brickaville fahafahana vonjy maika taorian’ny fiakaran’izy ireo fampanoavana sy mpitsara mpanao famotorana ny alarobia 22 novambra teo.
Sekoly ambony ESPIC Niampy 40 mianadahy indray ireo teknisianina navoakany
Nitombo isa indray ireo teknisianina ambony eto amintsika. Anisan’izany ireo 40 mianadahy vao navoakan’ny sekoly ambony ESPIC ( Ecole Supérieure Professionnelle en Informatique et Commerce) etsy 67 ha ny sabotsy lasa teo.
Ramiandravelo José - Tropy Victor Solo Nodimandry teo amin’ny faha-61 taonany
Misaona indray ny tontolon’ny zava-kanto Malagasy ary ny Teatra manokana fa nodimandry ny faran’ny herinandro lasa teo teny amin’ny HOMI Antananarivo teo amin’ny faha-61